ဘဝမှာ သူများအသုံးချခံ လူမဖြစ်စေဖို့အတွက် အဓိကကျတဲ့ အချက်(၅) ချက်ကို ရှောင်ပါ…. - Newposts
(1) သူတပါးအပေါ် သနားတတ်လွန်း တဲ့စိတ်ကိုလျော့ပါ…
ငါသာလျှင် သူ့နေရာမှာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လူတိုင်းအပေါ် သနားတတ်တဲ့ လူတွေကပဲ အမြဲတမ်း အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့် သူတပါးရဲ့ အသုံးချခံအဖြစ်နဲ့ ဘဝမှာ ရှင်သန်နေရတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူတိုင်းအပေါ် မျှတစွာ တွေးပေးပြီး သနားကြင်နာတတ်ခြင်းက လူတချို့အတွက် လိုအပ်ချက်တခု ဆိုပေမယ့် လူတချို့အတွက် သင့်ရဲ့သနားတတ်တဲ့စိတ်ကို ဟန်ဆောင်မျက် နှာဖုံးနဲ့ချနင်းသွားမယ့် လူတွေရှိနေတတ်ကြပါတယ်။
(2) ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ကို လူတိုင်းကိုမပေးပါနဲ့ ပြန်သုံးသပ်ပါ…
လူတဖတ်သားအပေါ် အမြဲတမ်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ တွေးပေးတတ်တဲ့ သူတွေဟာ တခုခုဆိုရင် သူများရဲ့အသုံးချခံ အဖြည့်ခံ လူသားတွေပါပဲ…
အဲ့ဒီစိတ်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ကိုယ့်သိက္ခာ ကို ချနင်းကြမယ့် သူတွေအတွက် အဓိက အားသာချက်တခုပါ။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းအပေါ် ကိုယ်ချင်းစာနာတတ်တဲ့ စိတ်နဲ့မြင်ပေးတာကောင်းပေမယ့် ပေးသင့်တဲ့လူလား မပေးသင့်တဲ့လူလားဆိုတာ ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။
(3) အားနာတတ်တဲ့ အကျင့်ကိုဖျောက်ပါ…
လူတိုင်းအပေါ် အားနာတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လိုအခြေနေမျိုးပဲရောက်ရောက် ကူညီတတ်ကြတဲ့ လူတွေရှိတတ်ကြပါတယ်… ဒီလိုကူညီလိုက်လို့ သူအဆင်ပြေသွားပေမယ့်ကိုယ်အရေးကြုံလါတဲ့အခါ ကိုယ့်ဘက်ကအဆင်မပြေပဲ ကျန်နေခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ များနေမှာပါ
ဒီလိုအခြေနေမျိုးက တကြိမ်တစ်ခါဆိုတာထက် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ဖြစ်နေတတ်တာမျိုးပါ။ ဒါက ကိုယ့်ရဲ့အားနာတတ်တဲ့စိတ်ကြောင့် သူတပါးရဲ့ချနင်းခြင်းကို မသိလိုက်ပဲ ကိုယ့်စိတ်ရင်းကိုက ကူညီချင်တတ်တဲ့ သူတွေရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုပါပဲ ။
ဒီအားနည်းချက်ကိုပဲ အခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုယ့်သိက္ခာ ချနင်းသွားမယ့် လူတွေအများကြီးရှိနေတတ်တာမမေ့ပါနဲ့။
(4) အယုံ မလွယ်ပါနဲ့…
အပြုံးတွေရဲ့ နောက်ကွယ်က ဝှက်ထားတဲ့ ဓားသွားတွေကို ကျွန်တော်တို့မမြင်နိူင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဘဝမှာ ကိုယ်ယုံကြည်ရတဲ့လူတွေကပဲ ကိုယ့်နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးသွားတာချည်းပဲမဟုတ်လား???
ကိုယ့်ဒူးတောင် ကိုယ်မယုံကြည်ရတဲ့ခေတ်ကြီးထဲမှာ အယုံလွယ်ပြီး သနားတတ်တဲ့ သင့်ကို ချနင်းမယ့် ဟန်ဆောင်မျက်နှာဖုံးတွေ နဲ့လူတွေ နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ ။
(5) ရိုးသားပါ။ မတုံးအပါနဲ့…
ရိုးသားသည့်ဂုဏ် စား၍မကုန်ဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားက မှန်တယ်ဆိုပေမယ့် ရိုးသားခြင်းဆိုတဲ့ နောက်က
တုံးအခြင်းကို တွဲမထားပါနဲ့… လူတိုင်းက ကိုယ့်လိုစိတ်မျိုး ရှိချင်မှ ရှိနိူင်တဲ့အတွက် လူတိုင်းအပေါ် အရိုးခံနဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံခြင်းမျိုးက
လူတချို့အတွက်ေ ကာင်းပေမယ့် လူတချို့အတွက် သင့်ရဲ့ရိုးသားခြင်းကို အခွင့်ကောင်းယူပြီးကိုယ့်သိက္ခာ ကျဆင်းအောင် ချောက်တွန်းဖို့ စောင့်နေတဲ့ လူတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရိုးသားခြင်းက ဂုဏ်ယူစရာဆိုပေမယ့် “တုံးအ”ပြီး လူတကားချနင်းမယ် ခပ်နုံနုံ လူအတစ်ယောက်တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဘဝမှာ ကိုယ်ကောင်းနေသ၍ ကိုယ့်ခေါင်းဘယ်မှ မရွေ့ဘူးဆိုပေမယ့်
ကိုယ့်အနား ရောက်လာသူတိုင်းက ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းဖို့ဆိုတာထက် သူတို့အပေါ် ကောင်းနေလို့သာ ကိုယ့်အနားမှာ ရှိနေခြင်းလည်း ဖြစ်နိူင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်ဘဝမှာ အသုံးချခံ ချနင်းခံရမယ့် လူမဖြစ်စေဖို့အတွက်အဓိကကျတဲ့ အချက်(5)ချက်ကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
မူရင်းရေးသားသူအား လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ် ပေးပါသည်။
ဘဝမှာ သူမြားအသုံးခခြံ လူမဖွဈစဖေို့အတှကျ အဓိကကတြဲ့ အခကျြ(၅) ခကျြကို ရှောငျပါ….
(1) သူတပါးအပျေါ သနားတတျလှနျး တဲ့စိတျကိုလြော့ပါ…
ငါသာလြှငျ သူ့နရောမှာဆိုတဲ့စိတျနဲ့ လူတိုငျးအပျေါ သနားတတျတဲ့ လူတှကေပဲ အမွဲတမျး အဲ့ဒီစိတျကွောငျ့ သူတပါးရဲ့ အသုံးခခြံအဖွဈနဲ့ ဘဝမှာ ရှငျသနျနရေတတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ လူတိုငျးအပျေါ မြှတစှာ တှေးပေးပွီး သနားကွငျနာတတျခွငျးက လူတခြို့အတှကျ လိုအပျခကျြတခု ဆိုပမေယျ့ လူတခြို့အတှကျ သငျ့ရဲ့သနားတတျတဲ့စိတျကို ဟနျဆောငျမကျြ နှာဖုံးနဲ့ခနြငျးသှားမယျ့ လူတှရှေိနတေတျကွပါတယျ။
(2) ကိုယျခငျြးစာစိတျကို လူတိုငျးကိုမပေးပါနဲ့ ပွနျသုံးသပျပါ…
လူတဖတျသားအပျေါ အမွဲတမျး ကိုယျခငျြးစာစိတျနဲ့ တှေးပေးတတျတဲ့ သူတှဟော တခုခုဆိုရငျ သူမြားရဲ့အသုံးခခြံ အဖွညျ့ခံ လူသားတှပေါပဲ…
အဲ့ဒီစိတျကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီး ကိုယျ့သိက်ခာ ကို ခနြငျးကွမယျ့ သူတှအေတှကျ အဓိက အားသာခကျြတခုပါ။ ဒါကွောငျ့ လူတိုငျးအပျေါ ကိုယျခငျြးစာနာတတျတဲ့ စိတျနဲ့မွငျပေးတာကောငျးပမေယျ့ ပေးသငျ့တဲ့လူလား မပေးသငျ့တဲ့လူလားဆိုတာ ပွနျလညျသုံးသပျဖို့လိုပါတယျ။
(3) အားနာတတျတဲ့ အကငျြ့ကိုဖြောကျပါ…
လူတိုငျးအပျေါ အားနာတတျတဲ့ စိတျကွောငျ့ ကိုယျ့ဘကျက ဘယျလိုအခွနေမြေိုးပဲရောကျရောကျ ကူညီတတျကွတဲ့ လူတှရှေိတတျကွပါတယျ… ဒီလိုကူညီလိုကျလို့ သူအဆငျပွသှေားပမေယျ့ကိုယျအရေးကွုံလါတဲ့အခါ ကိုယျ့ဘကျကအဆငျမပွပေဲ ကနျြနခေဲ့တဲ့ အခြိနျတှေ မြားနမှောပါ
ဒီလိုအခွနေမြေိုးက တကွိမျတဈခါဆိုတာထကျ အကွိမျကွိမျ အခါခါ ဖွဈနတေတျတာမြိုးပါ။ ဒါက ကိုယျ့ရဲ့အားနာတတျတဲ့စိတျကွောငျ့ သူတပါးရဲ့ခနြငျးခွငျးကို မသိလိုကျပဲ ကိုယျ့စိတျရငျးကိုက ကူညီခငျြတတျတဲ့ သူတှရေဲ့အားနညျးခကျြတဈခုပါပဲ ။
ဒီအားနညျးခကျြကိုပဲ အခှငျ့ကောငျးယူပွီးကိုယျ့သိက်ခာ ခနြငျးသှားမယျ့ လူတှအေမြားကွီးရှိနတေတျတာမမပေ့ါနဲ့။
(4) အယုံ မလှယျပါနဲ့…
အပွုံးတှရေဲ့ နောကျကှယျက ဝှကျထားတဲ့ ဓားသှားတှကေို ကြှနျတျောတို့မမွငျနိူငျပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ဘဝမှာ ကိုယျယုံကွညျရတဲ့လူတှကေပဲ ကိုယျ့နောကျကြောကို ဓားနဲ့ထိုးသှားတာခညျြးပဲမဟုတျလား???
ကိုယျ့ဒူးတောငျ ကိုယျမယုံကွညျရတဲ့ခတျေကွီးထဲမှာ အယုံလှယျပွီး သနားတတျတဲ့ သငျ့ကို ခနြငျးမယျ့ ဟနျဆောငျမကျြနှာဖုံးတှေ နဲ့လူတှေ နရောတိုငျးမှာ ရှိနတေယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့ ။
(5) ရိုးသားပါ။ မတုံးအပါနဲ့…
ရိုးသားသညျ့ဂုဏျ စား၍မကုနျဆိုတဲ့ ဆိုရိုးစကားက မှနျတယျဆိုပမေယျ့ ရိုးသားခွငျးဆိုတဲ့ နောကျက
တုံးအခွငျးကို တှဲမထားပါနဲ့… လူတိုငျးက ကိုယျ့လိုစိတျမြိုး ရှိခငျြမှ ရှိနိူငျတဲ့အတှကျ လူတိုငျးအပျေါ အရိုးခံနဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံခွငျးမြိုးက
လူတခြို့အတှကျေ ကာငျးပမေယျ့ လူတခြို့အတှကျ သငျ့ရဲ့ရိုးသားခွငျးကို အခှငျ့ကောငျးယူပွီးကိုယျ့သိက်ခာ ကဆြငျးအောငျ ခြောကျတှနျးဖို့ စောငျ့နတေဲ့ လူတှရှေိနတေတျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ ရိုးသားခွငျးက ဂုဏျယူစရာဆိုပမေယျ့ “တုံးအ”ပွီး လူတကားခနြငျးမယျ ခပျနုံနုံ လူအတဈယောကျတော့မဖွဈပါစနေဲ့။ ဘဝမှာ ကိုယျကောငျးနသေ၍ ကိုယျ့ခေါငျးဘယျမှ မရှဘေူ့းဆိုပမေယျ့
ကိုယျ့အနား ရောကျလာသူတိုငျးက ကိုယျ့အပျေါ ကောငျးဖို့ဆိုတာထကျ သူတို့အပျေါ ကောငျးနလေို့သာ ကိုယျ့အနားမှာ ရှိနခွေငျးလညျး ဖွဈနိူငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ဘဝမှာ အသုံးခခြံ ခနြငျးခံရမယျ့ လူမဖွဈစဖေို့အတှကျအဓိကကတြဲ့ အခကျြ(5)ခကျြကို တငျပွပေးလိုကျပါတယျ။